Music lagu kaydin karaa oo ay la socdaan warbaahinta kale ee Lugood. Waxay qaadi doono, files kala duwan kuwaas oo ka kooban doonaa macluumaad ku saabsan waxa ku jira in aad maktabadda. Guri kasta oo aan u baahnayn in ka badan hal computer in ordi karaan Lugood. Laakiin, waxaa jira xaalado marka waxaa loo baahan yahay in ay sii qulquli videos iyo music qalabka in lagugu xiro oo dhan in ka badan guriga. Haddii guriga uu leeyahay in ka badan hal computer gaarka ah si ay u maareeyaan, waxaad markaas xoojin karaa maktabadaha Lugood ka qalab badan hal maktabad hal kombiyuutar soo xulay.
1: biirtay Lugood Libraries
2: biirtay Lugood Maktabadaha la TunesGo
3: ka ah External Hard Drive ama kombiyuutarada kale biirtay Lugood Library
On account of tirada badan oo maktabado badan Lugood, ma fududa in iyaga loo adkeeyo. Ma aha mid fudud sida gubanaya disc ah ee isafgaradka ka dibna u raraya in computer cusub. Waxaa jira farsamooyin gaar ah, si kastaba ha ahaatee, ka badan ka dhigi kara geedi socodka ka mid ah biirtay maktabadaha fudud.
Lugood Library.itl had iyo jeer waa file aasaasiga ah. File Library.xml waxaa loo isticmaali karaa si ay u dajiyaan maktabadaha ka kombiyuutarada kale. Lugood qori doonaa kuwa files qaab ah in si fudud lagu akhrin karo si ay dhammaan codsiyada kale ayaa sidoo kale ka heli kartaa liis ay diyaarisey ee content ee maktabadda.
Haddii aad leedahay laba maktabadood, Library 1 iyo 2 Library, oo aad jeclaan lahayd inaad ku darto Library 2 ee ku jira si ay u Library 1, waxaad u baahan doontaa inaad u tagto folder Media ku Lugood in uu leeyahay aad content. Waxaad dooran kartaa File oo taga si Library iyo in la abaabulo Library. Waa inaad ka dibna hubi waayo, isku raaciyo Files 'dooro OK. Marka aad qabtid files badan oo aan ku folder Lugood Media ee, waxay qaadan kartaa dhawr daqiiqo. Samee playlist cusub oo u dhiiba calaamadda ku meel gaar ah. Waxaad u baahan doontaa in jiidi gal ah Lugood Media galay Lugood dib markii wareegaya playlist in si gaar ah.
Waa inaad ka dibna dooro File oo taga si Library iyo in Import playlist iyo doorato Lugood Library.xml file in la soo guuriyeen ka Library Labaad. Waxay kaa caawin doonaa in aan ku daray kaliya ku jira oo dhan oo la jiido si Lugood laakiin playlists ka maktabada in si gaar ah ayaa sidoo kale lagu dari doonaa.
Waxaad u baahan doontaa in aad maskaxda ku hayso, in aan awood u yeelan doonaan in ay sii haystaan ​​ratings iyo ciyaaro dacwadood. Waxaa sidoo kale laga yaabaa in ay fursad u tahay in aad leedahay waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah music oo la labalaabka on inay Library 1 ee files warbaahinta. Waxaa heli kartaa wax adag haddii aad maktabadda dhacdo inuu noqdo mid weyn.
Hadda waxaad haysataa doonaa maktabad in ka qayib playlists laga soo qaaday laba maktabadood oo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa suuro gal ah in ay jiraan waxa laga yaabaa in qaar ka mid ah tus ka files warbaahinta. Lugood idin tusiyo daba yaac ah. Marka maktabadda music ah, waxaad dooran kartaa Option (ALT) oo muhiim ah oo uu aado waayo, Show qaadanina Akownnada la Items '. Marka geedi socodkan waxa weeye in ka badan, waxaad lahaa si guul leh ku biireen laba maktabadaha. Playlist ku-meelgaarka ah, oo waxaa la abuuray ka hor, waxaa laga yaabaa markaas in la tirtiro.
Wondershare Ee TunesGo waa fiican ee ku biirtay iyo wareejinta content ka socoda hal ama xataa badan ah qalabka macruufka kombiyuutaro shakhsi cusub ama unugyada Mac. Waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee la heli karo suuqa ugu gebaggebaynta maktabadaha Lugood aad ka data in horay loo synced qalabka kala duwan ee kala duwan. TunesGo ayaa waxaa hore loogu yaqaanay MobileGo u Apple ee macruufka. Waxaa hadda la yeynan xoogga badan oo ku saabsan caawinta inuu ka soo kabsado maktabadaha music ka iDevices oo ku biirtay music ka darbi badan mid ka mid maktabadda Lugood. Waxaa kale oo waxtar leh in loo dhoofiyo content ka computer ah oo gaboobay ama Mac qaybta cusub
TunesGo waa fududahay in la isticmaalo. All inaad samayso waa si loo soo dajiyo codsigan on your computer shakhsi ama Mac iyo xiriiriyaan qalabka iPhone, iPad ama iPod, hal mar ah, dooro playlist ah in aad rabto in lagu wareejiyo. The playlists iyo content ee la doortay waxaa loo wareejin doonaa oo ku biireen si Library Lugood gudahood your computer. Waa tallaabo dheeraad tegi doonaa ka badan maamulayaasha maktabadda kale. Marka aad ku milmaan content music on inay maktabad cusub, waxaad sii wadi kartaa ratings song aad, ee soo oogay bood iyo play ku soo oogay dhawrsan. TunesGo sidoo kale awood u yeelan doonaan in ay nuqul ka videos ama wixii macluumaad kale oo ka iDevice dooratay back to your computer iyo maarayn maktabadaha ah. Waa aalad Saaxiibkiis fiican ee dhamaan isticmaalayaasha ee Lugood sida ay u ogolaanaya inay sameeyaan waxa Lugood ma sheegi karo.
Marka aad qortid maktabadda Lugood ku saabsan in la drive dibadda u adag, waa ay fududahay in loo adkeeyo oo ku milmaan maktabadaha. Caqabad ugu weyn waa in Lugood ma bixiyaan hab kasta oo toos ah si ay u midowdo laba maktabadood oo kala duwan Lugood. Isticmaalayaasha ayaa laga yaabaa inay gacanta dajiyaan oo dhan music iyo warbaahinta files galay mid ka mid database ay maktabadda.
Waxaad u baahan tahay inaad furaysto drive adag galay your computer si ay u milmaan iyo abuuro maktabad cusub Lugood naftaada. Waxaad markaas u baahan doontaa in ay helaan folder Lugood ku drive dibadda adag iyo Lugood folder music Dhexdeeda taas oo ka kooban music ah, podcasts ama filimada. Dooro galalka aad rabto in aad la dhaqaajin ka music folder Lugood ku drive adag iyo kuwaa oo si aad `qaybta Library 'ee Lugood aad kombuutarka. Marka qaybta bilaabo noqdo buluug, xogta loo wareejiyey maktabadda cusub. Waxaad haysan doontaa in la xasuusto in aad waayi doonto iyo dacwadood play ratings Xiddiggu markuu music loo dhaqaajinayo maktabad cusub.
Sidee si ay u gudbiyaan Podcast ka iPhone in Lugood
> Resource > Lugood > Sidee inay la midowdo maktabadaha Lugood